4K - Egwu na egwu na ntanetị maka vidiyo vidio YouTube ma ọ bụ ọrụ multimedia
HomeOzi akpado "4K"
blog, ugwu, video	 6.1.2018 6.1.2018
Mrazik (Russian Morozko, Morozko) bụ ihe nkiri Soviet mara mma nke sitere na 1964, nke a na-agbasakarị na TV Czech na oge Krismas. Ntu oyi (nna nna Mraz) bu kwa ihe omuma nke ihe omumu nke Slavic. Nkiri
Pančavský nsụda mmiri 4k video
Pančavský Waterfall (German Pantschefall) bụ mmiri mmiri na obodo Špindlerův Mlýn na Hradec Králové Region. Nke a bụ mmiri kachasị elu na Czech Republic. Ọ na-agbatị mita 148 ma dị na mkpọda ebe ọwụwa anyanwụ